PL Drafitra MAINTENANCE ho an'ny orinasanao na orinasanao - Ikkaro
firosoana >> Fikolokoloana indostrialy >> Drafitra fikojakojana
El drafitra fikojakojana voalahatra dia andiana hetsika na hetsika natao manokana hanatrehana fametrahana na masinina. Amin'izany fomba izany dia natao hisorohana ny tsy fahombiazana lehibe mety hitranga, na dia tsy manome toky 100% aza fa afaka hatsahatra avokoa izy rehetra. Amin'ny tranga tsirairay, ny fomba fiasa dia mety miovaova, satria ny fitaovana rehetra dia tsy mila asa fanitsiana mitovy. Misy ifandraisany akaiky amin'ny fikojakojana fitantanana.
Drafitra fikojakojana misoroka
Mba hanao drafitra tsara Fikojakojana misoroka, tokony horesahina ireo dingana fototra:
Mamaritra tanjona sy tanjona kendrena. Tsy maintsy mazava ny fomba fihetsika sy ny tanjona, toy ny fampihenana ny isan'ny tsy fahombiazana amin'ny%, ny fampitomboana ny fisian'ny fitaovana na ny fametrahana amin'ny%, sns.
Kajy vola. Ilaina ny mazava tsara hoe ohatrinona ny vola hampiasaina amin'ireo asa ireo. Ny orinasa tsirairay dia afaka manolotra volavolan-toekarena na hafa miankina amin'ny fahafaha-manao sy ny filàna.
Fitaovana ilaina. Tsy maintsy manana lisitra miaraka amin'izay rehetra ilainao ianao, na fitaovana na kojakoja fitehirizana ampy.
Fanadihadiana teo aloha. Raha efa nisy ny fikojakojana sasany, dia azo ampiasaina izy io mba hahazoana traikefa sy hanatsarana ny fomba fikarakarana amin'ny ho avy. Raha tsy izany dia mifototra amin'ny fandalina teorika ny zava-drehetra ary mety tsy dia marina.
Manantona mpamatsy fitaovana sy mpanamboatra. Fantatr'izy ireo tsara ny momba ny fampiasana na fitsaboana ny rafitr'izy ireo, ny fandeferany, ny mari-pana ahazoana alalana betsaka indrindra, ny enta-mavesatra mety, sns.
Mankato ny lalàna sy fiarovana ara-dalàna. Miankina amin'ny firenena, vondrom-piarahamonina mahaleo tena sns izany.
Angony na hampiofana ny mpiasa mety. Tsy afaka mihetsika ianao raha sendra tsy fahombiazana raha tsy manana fahalalana ara-teknika na ny fanafody mety ho ratsy noho ny aretina. Ankoatr'izay dia tsy maintsy faritana ny fahaizan'ny olona tsirairay, izany hoe izay hataon'ny tsirairay.
Safidio ny karazana fikolokoloana: manitsy, maminavina ary fisorohana. Vantany vao voafidy, dia ahoana ary rahoviana no hisy izany dia kasaina.
Famerenana tsy tapaka. Mba hahafahan'ny drafitra miasa tsara dia tsy maintsy dinihina tsy tapaka izy io ary misy valiny, izany hoe mianatra avy amin'ny zavatra niainan'ny fikolokoloana tsirairay mba hihatsara.
Ohatra amin'ny drafitra fikojakojana
Un ohatra ny drafitra fikojakojana mampiasa ny maodely fisorohana ary manitsy amin'ny sombin-fitaovana iray dia mety ho toy izao manaraka izao, ho an'ny motera fandoroana anaty fiara ara-barotra:
Ny tanjona lehibe indrindra dia ny hitazomana ny fiara amin'ny toerana tsara, miasa amin'ny fahafaha-manao feno araka izay tratra.
Mekanika mahay no miandraikitra ny fanaovana fikojakojana fisorohana isaky ny 18000 km na amin'ny ora fiasana 2600.
Rehefa nandeha lavitra io fiara io, dia hanao fizahana ara-pahitana ny motera (mekanika ny faritra, fantsona, haavon'ny tsiranoka,…) ny mekanika ary hanao fanovana solika ihany koa. Raha toa ka tapa-kevitra ny mpanamboatra fiara fa aorian'io elanelana io na amin'ny fepetra manokana dia misy faritra hafa tsy maintsy arahi-maso na soloina, dia ho tanterahina ihany koa.
Hanadio koa izy io raha ilaina. Amin'izany fomba izany dia miandraikitra ny fitazonana ireo faritra amin'ny toe-javatra tsara izy ireo, hisorohana ny lozika na ny fanapoizinana, ny fanesorana ireo zavatra vahiny na mampidi-doza, sns.
Ity mpandraharaha ity ihany dia hanao fanandramana miasa mba hanamarinana fa miasa tsara ny rafitra fiara rehetra. Izany dia hatao amin'ny fahitana na amin'ny fomba azo arahana, manaraka ny fepetra ilaina amin'ny fiarovana. Amin'ity tranga ity, tsy misy mihoatra ny fetra naparitaka.
Izany dia hisorohana ny olana mety hitranga amin'ny ho avy, saingy tsy manome antoka izany fa tsy hitranga ny tsy fahombiazan'ny fiara. Na eo aza izany fikolokoloana izany dia hisy ny fotoana a Fikolokoloana. Amin'ity tranga ity, ny mekanika dia hanatrika ny fiara rehefa mijanona tsy miasa tanteraka na amin'ny ampahany. Tsy kasaina izany, ary tsy maintsy mihetsika haingana araka izay tratra ianao mba hamerenany azy hiasa haingana araka izay tratra.
Drafitra fikolokoloana ho an'ny fametrahana herinaratra
In the case of a drafitra fikojakojana ny fametrahana herinaratraToy ny fisorohana, ny fifehezana azy ireo dia tsy maintsy omena antoka hisorohana ny loza mety hitranga ary koa ny fivezivezena. Izany dia misy fizahana ara-teknika sy fiarovana.
Ireo mpiasa teknika dia tokony ho ampy, iza no afaka Ary mampahafantatra inona no ataony. Ny fitaovana ampiasaina sy ny fitaovana dia tokony hanaja ny fenitra sy ny fanamarinana ny firenena ampiasana azy. Ireo fenitra ireo dia amin'ny fomba ampiasana azy sy amin'ny kalitao sy ny fiarovana izay tsy maintsy omen'ny mpamatsy azy.
Amin'ny tranga fametrahana herinaratra, ny mpiasa marina dia herinaratra. Miaraka amin'ny akanjo miaro (insulator) ary fitaovana ampy hiasa am-pilaminana. Saingy amin'ity tranga ity dia mila mitandrina ny fametrahana elektrika marina ny tranobe sy ny fitaovana fotsiny ianao fa tsy ny rafitra hafa. Ohatra, raha misy mpangalatra entona mifamatotra amin'ny tamba-jotra, toera-panafody, na milina indostrialy dia tsy fifaninanana aminao izany. Amin'ireo tranga ireo dia tsy maintsy misy ny mpiasa manokana ao amin'ity karazana rafitra ity.
ny lakile amin'ny fikojakojana ny fametrahana herinaratra Izy ireo dia:
Fantaro ny karazana fametrahana azy.
Misy dingana tokana misy mpitarika roa, dingana iray ary iray hafa tsy miandany, ankoatry ny tany azo antoka. Io no mety hitranga amin'ny trano, atrikasa kely na birao rehetra.
Etsy ankilany, misy ny triphasic, izany hoe ireo ampiasaina amin'ny indostria sy sambo lehibe. Amin'ireo tranga ireo dia misy conducteur efatra, dingana telo ary iray tsy miandany. Ho fanampin'ny fifandraisana amin'ny tany miaro.
Fantaro ny fahaizan'ny rafitra. Ny fametrahana tsirairay dia manana fatran'ny amps ary ampanjifaina herinaratra. Raha mihoatra izany dia mety hitranga ny fahatapahana na olana hafa. Amin'ny dingana tokana dia ambany izy, satria tsy avo toy ny indostria ny fitakiana.
Manaova fanazaran-tena amin'ny fikojakojana: fanaraha-maso maso, fanadiovana, fametrahana tsipika vaovao raha ilaina, fametrahana singa ho an'ny hery lehibe kokoa, hahazoana antoka fa miasa ny rafitra fiarovana, fametrahana rafitra mba hialana amin'ny spikes sy overloads, fanaovana fandrefesana multitester hahitana izay masontsivana ilaina. Sns Ho an'ity dia tsy maintsy arahi-maso manokana ireto manaraka ireto:
Ny hatevin'ny tariby conductive miloko (10mm, 6mm, 4mm, 2mm, ...), satria miankina amin'ny fampiasana azy ireo dia tsy maintsy milimetatra mihoatra ny latsaka.
Fanjakan'ny insulator sy ny fifandraisana an-tany.
Manadio ny fifandraisana. Ohatra, ny menaka na ny loto dia mety hiteraka hafanana be loatra amin'ny fitaovana ampiasaina, indrindra raha mitaky herinaratra mahery izy ireo. Mety hiafara amin'ny olana na fahamaizana ratsy kokoa izany.
Avereno jerena ny tontonana elektrika, izany hoe ny tontonana fanaraha-maso sy fiarovana ankapobeny. Ao anatiny dia misy singa tena lehibe, toy ny:
ICP na Power Control Switch: manapaka ny onja ankehitriny rehefa nihoatra ny fahefana nifanarahana. Izy io koa dia misoroka ny be loatra na ny faribolana fohy. Izany no maha-singa fiarovana lehibe azy io, fa tsy singa mametra fotsiny araka ny inoan'ny maro.
PCS na Surge Control Protector: izy io dia switch izay miaro ireo fitaovana mifandray amin'ny tamba-jotra amin'ny tampon'aratra mety hanimba azy ireo. Izany hoe, toy ny sivana izy io. Zava-dehibe izany mba tsy hampiakarana ny vidin'ny fanamboarana fitaovana hafa raha sendra misy spikes.
IGA na Fanovana Jeneraly mandeha ho azy: izy io no manelingelina ny famatsiana rehefa mihoatra ny herin'ny fametrahana izay azo zahana. Misoroka olana hafa izany.
ID na Switch Differential: manapaka herinaratra raha sanatria misy fivoahana ankehitriny. Ohatra, rehefa misy olana amin'ny appliance mifandray, socket sns.
PIA na Small Automatic Switches: mifehy ny herinaratra amin'ny sehatry ny tranobe (efitrano, sehatra, ...) izy ireo.
Manaova fikojakojana fanitsiana raha toa ka tsy mahomby, manolo singa na tariby.
Azonao atao izany zavatra raha sendra tsy fahombiazana dia karakarao ny fotodrafitrasa hanitarana ny androm-piainany sy ny toe-pahasalamany ary tadiavo mialoha izay mety ho olana mialoha.
Manova ny fikojakojana
Karazana fikolokoloana indostrialy
RCM (Fikojakojana mifantoka amin'ny fahamendrehana)
TPM (Fikojakojana vokatra tanteraka)
Sokajy Fikolokoloana indostrialy Ticket navigation
1 Drafitra fikojakojana misoroka
1.1 Ohatra amin'ny drafitra fikojakojana
1.2 Drafitra fikolokoloana ho an'ny fametrahana herinaratra